यो पनि जसको वर्तमान राज्य मात्र हो देश को व्यावसायिक बजार मा स्थिर गम्भीर व्यापारी, को बीउ एउटा सानो व्यापारी देखि बढ्न सम्भव छ, तर वर्ष वर्ष देखि बलियो बढिरहन्छ कि आश्चर्य गर्ने सबैलाई, यो लेख पढ्न सिफारिस गरिएको छ। यो कि खाना मा लगे धेरै साबित गर्न सक्षम थियो नगर्ने पहिलो आवश्यकता हो एक मानिस समर्पित हुनेछ, यो व्यापार पत्रिका "फोर्ब्स" अनुसार शीर्ष सबैभन्दा सफल कम्पनीहरु आफ्नो कम्पनी ल्याउन सम्भव छ। आफ्नो नाम डेनिस Stengelov छ यो 45 वर्ष राजा नाश्ता, बीउ, वेफर्स, चकलेट र चिप्स भयो लागि, म पेशेवर ठूलो टेनिस र गोल्फ मा संलग्न छन् गर्नेहरूका लागि अष्ट्रेलिया मा खेलकुद एकेडेमी खोल्न सक्षम थियो। तर पहिलो कुरा पहिले।
औसत सोभियत बाल्यकाल, को outback बिताएको
Stengelov डेनिस Nikolaevich मई 14, 1972 मा जनसंख्या बस भन्दा 500 मान्छे, टम्स्क Gubin गाउँमा जन्म भएको थियो। आफ्नो बुबा, निकोलस को खेत "Nelyubinsky" को समय निर्देशक थियो। डेनिस Stengelov परिवार बरु ठूलो छ: आफ्नो भाइ इगोर बाहेक, त्यहाँ दुई बहिनीहरूले (ओक्साना र जुलिया) छन्। उनको काखमा दुई जवान छोराहरू एक मानिस धेरै गाह्रो थियो किनभने जन्म दिने पछि डेनिस आमाको मृत्यु, र आफ्नो पिता चाँडै remarried, त्यसैले व्यापारीले बहिनी - एक सारांश।
विभिन्न देशहरूमा र शहर, तर पनि
उहाँले एउटा अनुकूल वातावरण मा वृद्धि र अझै पनि ग्रह विभिन्न कुनामा गर्न लगभग सार्न सारा परिवार भन्ने तथ्यलाई बावजुद, आफ्नो प्रियजनलाई सबैभन्दा cordial सम्बन्ध संग राख्छ। भाइ इगोर रूस मा आफ्नो परिवार संग बसोबास र साझेदार डेनिस Shtengelova व्यापार, आफ्नो बुबा उहाँले कृषिमा संलग्न छ जहाँ युक्रेनको गए छ। आफ्नो काम पनि राम्ररी व्यापार छोराहरू संग लिङ्क छन्। राजधानी मा शिक्षा प्रबन्धक र तिनको परिवार मा बहिनी ओक्साना बाँचिरहेका छौं। दिदी जुलिया लामो स्विट्जरल्याण्ड मा बस्ने भएको छ, र अब कहाँ उहाँले हालै बनाइएको थियो जो डेनिस Shtengelova विषयमा खेल जटिल, सामना गर्न मदत गर्छ अष्ट्रेलिया, सारियो। उहाँको बारेमा हामी तल वर्णन।
समय अध्ययन र व्यापार मा पहिलो कदम
1990 मा Stengelov अर्थशास्त्र विभाग मा टम्स्क राज्य विश्वविद्यालय शहर प्रवेश। त्यहाँ उहाँले नै विभाग मा सफलतापूर्वक अध्ययन जो मान्छे, थाह भयो, र अन्त मा, 1994 मा तिनले आफ्नो हात व्यापार मा खोजे। आफ्नो क्यारियर मा प्रारम्भिक, डेनिस Stengelov घरेलू उपकरण सामना गर्न प्रयत्न गर्नुभयो, तर उद्योग को बिक्री उहाँलाई इच्छित परिणाम ल्याउन थिएन, र उहाँ र उहाँका मित्र द्रुत संदिग्ध विचार त्यागेर।
सूरजमुखी को बीउ
एउटै 1994 मा, सँगै आफ्नो साथीहरूसँग आत्म-सेवा थोक कच्चा बीउ मा आफ्नो हात प्रयास गर्ने निर्णय गरे। यसलाई यो विचार, कुनै पनि वित्तीय सफलता ग्यारेन्टी थिएन साझेदार Shtengelova र आफ्नो मित्रहरू हजुरआमा-pensioner थियो किनभने जस्तो थियो। तिनीहरूले कच्चा उत्पादन अप किनेको र जनता, सत्य, पोलेको यो disseminate। हाम्रो देश मा फुरतीला 90, यी Grannies एक विशाल संख्या थिए, तिनीहरूले हरेक शहर मा देख्न सकिन्छ। दुई भन्दा कम वर्ष पछि, डेनिस Shtengelovym नेतृत्व मित्र एउटा सानो व्यापार सूर्यमुखी तेल को उत्पादन मा संलग्न छ निर्माण गर्न आफ्नो पैतृक गाउँमा असफल भयो। यो maslofasovochny बोट थियो "Guba तेल।" यो एक व्यापार निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा ठूलो मद्दत आफ्ना पिता डेनिस निकोलस Stengelov प्रदान गरेको छ कि टिप्पण लायक छ। ठीक छ, कुरा गति र एक व्यापारी प्राप्त भएपछि, कुनै एक रोक्न सकेन। उहाँले तिनीहरूका बीचमा थियो।
पहिलो प्रमुख खरिद
वित्तीय सफलता निर्देशक र मालिक डेनिस Stengelov गर्न सडक मा लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय, एक, मिठाई उत्पादन "Yashkino" को केमेरोभो अन्तर्गत स्थित को उत्पादन को लागि उद्यम को अधिग्रहण थियो। त्यो 1997 मा भएको थियो। समय द्वारा बोट खराब हालत मा थियो, तर यो अवस्था व्यवसायी चिन्ता छैन। त्यहाँ "Yashkino" Stengelov को खरिदका लागि आवश्यक रकम ऋण समयमा विश्वविद्यालय विदेशी भाषा को एक विद्यार्थी थियो जो आफ्नो दिदी जुलिया, नाम लिए कि अफवाहहरु छन्। व्यावसायिक अन्त धोका थियो कम्पनी उठाउनु र सबैभन्दा न्यूनतम सर्तहरू मा प्रतिस्पर्धा बीच अग्रणी स्थिति यसलाई ल्याउन व्यापारी र व्यापार गर्न योग्य दृष्टिकोण मदत गरे। 2004 मा पहिले नै, मिठाई कारखाना "Yashkino" हाम्रो देशमा वेफर्स को सबै भन्दा ठूलो निर्माता रूपमा रूसी संघ को पुरस्कार सम्मानित गरियो।
यस मिठाई व्यवसाय मा सफलता पछि, 2002 मा, एक पकड Stengelov पाँच खाद्य प्रसंस्करण बिरुवाहरु हुन्छन् जो "KDV समूह", भनिन्छ उहाँले संगठित र यूराल र साइबेरिया मा सञ्चालन छन्। सोही, वित्तीय र आर्थिक पत्रिका "फोर्ब्स" अनुसार, अब Shtengelova पकड छ 90 आय मा, नेता कम्पनीहरु को शीर्षक लागि प्रतिस्पर्धा 200 को वर्ष गणना, रैंकों। "KDV समूह" "Yandex" र "Pegas Touristik" जस्ता दिग्गज बचाउनुभयो। 2015 मा, पकड दर पर्याप्त छैन त्यसैले उच्च, तर खराब थिए - तिनीहरूले 128 ठाउँमा belonged।
नूनिलो नाश्ता र माछा मा लगे कम्पनीहरु खरिद
त्यहाँ कसैले थियो, र एक व्यापारी समुन्नतिको कथा मात्र गति पाउन थालेका रोक्नुहोस्। "ब्रिजटाउन फूड्स" र "साइबेरियन तट": 2008 मा, "KDV समूह" डेनिस Stengelov को सीईओ दुई कम्पनीहरु नाश्ता र माछा को दिलकश नाश्ता को उत्पादन मा केन्द्रित प्राप्त। 2010 मा, व्यापारी थप र "Zolotoy Terem", ट्रेडमार्क "Barents" को कानुनी मालिक थियो जो किन्छ। हाल, को "KDV समूह" यति विस्तार विकास कि रूस मार्फत 1,00,000 भन्दा बढी रिटेल आउटलेट छ। उद्यम शाखा कार्यालय साइबेरिया, प्रशासनिक केन्द्र र रेल नजिक बाट सारियो। तथापि, टाउको कार्यालय पकड अझै पनि टम्स्क शहर छ। Stengelov डेनिस कम्पनी राम्ररी काम र राम्रो आम्दानी उत्पादन गर्न सक्षम छ भन्ने टिप्पणी, तर उत्तर मा सफलतापूर्वक विकास राजधानी को वरपर बसोबास, आफ्नो कार्यालय र कारखानों को त सबै, उहाँले चुपचाप केन्द्र नजिक वहन।
"Babkiny बीउ" र मिठाई कारखाना "रातो तारा"
2013 मा, सीईओ र कम्पनी "KDV समूह" को सह-मालिक प्याकेज बीउ को उत्पादन को लागि कम्पनी किन्न निर्णय गरेको छ "Babkiny बीउ।" यो तपाईं एक राम्रो वार्षिक आय, अर्थात्,5अरब rubles ल्याउन, व्यापार खरिद किनभने डेनिस Shtengelova शब्दहरू मा, एक धेरै राम्रो सम्झौता भएको थियो। त्यसै वर्ष मा "रातो तारा" किनेको र मिठाई थियो। यो सम्झौता पूर्ण spontaneously गरिएका, र यो मा, कुनै एक को पनि सपना देख्यो, बस सकेसम्म छलफल भएको थियो जुन एक प्रस्ताव प्राप्त। मिठाई पनि, "Babkiny बीउ" जस्तै आय उत्पन्न गर्न सक्षम, अब एउटा कार्य हो भन्ने तथ्यलाई बावजुद Stengelov डेनिस Nikolaevich त्यहाँ सबै स्तरवृद्धि गर्न चाहन्थे। पहिले, आफ्नै शब्दमा, कम्पनी टाढा केन्द्र हो, र यो वोरोनिश कतै स्थित थियो भनेर उहाँले मन पराएका छन्। दोश्रो, चकलेट उत्पादन कर्मचारी, अप्रचलित खरिद गर्न प्रयोग र OBLIVION गएका थिए प्रविधि,। कर्मियों, उपकरण, स्थान, चकलेट नुस्खा: Stengelov लगभग सबै परिवर्तन गर्न चाहन्थे। खैर, त्यो सफलतापूर्वक बाहिर, एक नयाँ निवास गर्न कारखाना सार्ने बाहेक लगे छ। यो एक व्यापारी को योजना अझै पनि छ। एक प्रसिद्ध केक पट्टी "स्प्रिन्ट", चकलेट सफलतापूर्वक नयाँ नेता को आगमन संग परिवर्तन थियो नुस्खा जो, यो अझै पनि धेरै लोकप्रिय मीठो दाँत हाम्रो देश छ।
Stengelov डेनिस Nikolaevich, जसको जीवनी बस माथि उल्लेख गरिएको छ, सफलतापूर्वक विवाह र सुखी परिवार मान्छे हो। 17 र 16 वर्ष पुरानो दुई वयस्क छोरा र सात वर्ष पुरानो छोरी: उहाँले तीन छोराछोरी छन्। 2010 मा सारा परिवार अष्ट्रेलिया बस्न सारियो र अब Stengelov रूस निम्त्याउँछ भन्ने कुरा बीच भताभुङ्ग र आफ्नो परिवारको बाध्य छ। आफ्नो जेठो छोरा ठूलो टेनिस गरिरहेको छ र बारम्बार हाम्रो देश, अष्ट्रेलिया मा ल्यान्डमार्क घटनाहरू मा, साथै संयुक्त राज्य अमेरिका मा रूपमा भाग छ। विशेषज्ञहरूले सफल खेल भविष्य भविष्यवाणी छन्। दोस्रो छोरा पनि व्यावसायिक स्तरमा टेनिस सिकाउन स्कूल जाँदै छ। बच्चाहरु व्यवसायी टेनिस लागि सायद यस्तो बलियो आवेग खेलकुद जटिल को निर्माण मा निर्णय गर्न उहाँलाई नेतृत्व।
खेल मा निवेश
Geniralny निर्देशक र औद्योगिक पकड कम्पनी को संस्थापक "KDV समूह" डेनिस Nikolaevich Stengelov लामो टम्स्क शहर मा खेलकुद जटिल निर्माण गर्न योजना, तर तरिका आफ्नो योजना परिवर्तन भयो। सायद यो अष्ट्रेलिया मा रूसी व्यापारीले परिवार देखि एक प्रस्थान रूपमा सेवा, र नाश्ता, बीउ र मिठाई राजा विदेश आफ्नो बाटो लड्न निर्णय हुन सक्छ। तर हुन कि यो नयाँ खेल जटिल बनाएको हुन सक्छ गरिएको र क्वीन्सल्याण्ड को गोल्ड कोस्ट को शहर मा अष्ट्रेलिया मा सञ्चालन हालिदिए। बाटो गरेर, कर्मचारी यसको नागरिकहरु को जीवन बारेमा धेरै चिन्तित छ र रहन स्वर्गीय स्थान मानिन्छ। त्यहाँ शहरी जंगल अधिकारीहरु को बीचमा सागर, एउटा कृत्रिम द्वीप निर्माण पनि कहाँ यो बाट पानी, र पनि एक वास्तविक लहर छ कि न। खेल केन्द्र, रूसी व्यापारीले लगानीको मा निर्मित - एक टेनिस एकेडेमी र एक गोल्फ क्लब। नयाँ खेल जटिल को टाउको मा Stengelov उहाँले 2010 मा अष्ट्रेलिया, पछिल्लो 15 वर्ष बस्ने स्विट्जरल्याण्ड, बदलिएको थियो जो आफ्नो बहिनी जूलिया, राखे। खेल केन्द्र त लामो शट अभ्यास उद्देश्य 40 गोल्फ कोर्स समायोजित गर्न सक्षम छन्, यो विशाल क्षेत्रमा पर्छ। क्षेत्र 12 प्वालहरू संग सुसज्जित छ। पनि केन्द्रमा तपाईं लोकप्रिय खेल को एक मिनी संस्करण गर्न सक्नुहुन्छ। उनको विचार मंच लागि, 18 प्वालहरू संग सुसज्जित। यो दुवै क्षेत्रहरू नवीनतम प्रविधि संग सुसज्जित र विशेष आमन्त्रित यहाँ उच्च विभाग कोच द्वारा नियन्त्रित छन् भने छ। लेजर ट्रयाकिङ बल, ultrasensitive क्यामेरा पिच मा खेलाडी ट्रयाक र हड्ताल गर्न सही चुनिएको स्थिति घोषणा बीप - यो खेलकुद जटिल मा स्थापित सबै उच्च प्रविधी नवाचार, छ।
डेनिस Stengelov, बैंक तोड्न एक अनुमान पर्याप्त लायक, नयाँ खेल केन्द्र पनि खेलाडीहरू सबै को सोचा छ। यहाँ यो एक विशेष कोटिंग संग 12 कोर्ट र 8 कठोर संग फिट। जवान बालबालिकाको लागि, एक विशेष चिन्तनशील पर्खाल स्क्वास लागि कोर्ट छ बनाए। पनि खेल परिसर स्विमिंग पूल रेस्टुरेन्ट, पसलहरूमा, र धेरै छन्, त्यसैले यसलाई उचित मानिन्छ र मनोरञ्जन केन्द्र गर्न सकिन्छ। परियोजना - आफ्नो बहिनी, बच्चा, 2004 मा Shtengelova परिवार अष्ट्रेलिया Queensland छैन भ्रमण यदि भयो छैन सक्छ जो संग एक संयुक्त उद्यम। त्यसपछि तिनीहरूले कारण बाढी गर्न थाईल्याण्ड मा एक योजना छुट्टी गए, र अष्ट्रेलिया मा छुट्टी मा भयो। तब देखि, सारा परिवार एक व्यापारीले प्रेम गरे तस्मानिया को द्वीप र देश, kangaroos एक प्रशस्त लागि प्रसिद्ध।
सफल व्यापार व्यवस्थापन 23 वर्ष को परिणाम
निष्कर्षमा म उपलब्धिहरू डेनिस Shtengelova आज दावा को एक सूची बनाएर माथिको सबै संक्षेप गर्न चाहनुहुन्छ:
सफल व्यापार को 23 वर्ष को लागि डेनिस Shtengelov उत्पादन 50 टन दैनिक उत्पादन मा पट्टी पार। धेरै निकट भविष्यमा मा, व्यापारी एक लाख आधा चिन्ह पुग्न योजना।
आफ्नो भाग अन्तर्गत 16 भन्दा बढी हजार मान्छे छ, र आफ्नो कर्मचारी को कर्मचारी चाँडै हरेक दिन replenished।
यसको होल्डिंग को सञ्चालन राजस्व 40 भन्दा बढी अरब rubles छ।
उहाँले वित्तीय र आर्थिक पत्रिका "फोर्ब्स" अनुसार सय भन्दा सफल व्यापार मालिकहरुको प्रविष्ट गर्नुभयो। डेनिस Stengelov "Yandex" र "Pegas Touristik" जस्ता दिग्गज द्वारा overtaken।
उहाँले अष्ट्रेलियन गोल्ड कोस्ट ठूलो टेनिस र गोल्फ प्रशिक्षण लागि एकेडेमी खडा गरेको छ।
बल्ब कार कोठा रोशनी को प्रतिस्थापन
बाल्यकाल मा किम Kardashian। जीवनी र फोटो
Nastya Shpagin - बार्बी को छविमा एनिमे एक प्रेमी
अभिनेता सर्गेई Parshin: जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन
Aleshin इगोर Viktorovich: जीवनी र सामान्य को फोटो
कार्लोस को स्याल: एक जीवनी
के विषयमा भएको न्यायीक अधिकारी विचार छ? गतिविधिको विशिष्टता
काम को अनुक्रम: आफ्नो हातले न्यानो तल्ला कसरी बनाउने
रेस्टुरेन्ट "सातौँ स्वर्ग" - पुनर्जीवित आकर्षण मास्को
पत्थर कचौरा (समारा क्षेत्र)। Nikolaya Chudotvortsa स्रोत प्राप्त गर्न कसरी
सबैभन्दा ADSL-routers: सबै भन्दा राम्रो मोडेल र उत्पादकहरु को समीक्षा को एक समीक्षा। ADSL कन्फिगर / वाइफाइ-राउटर
को यूएई मा के किन्न? को एमिरेट्स मा किनमेल: के यूएई मा cheaply किनेको गर्न सकिन्छ?
बगैंचामा चींटियहरुलाई लड, वा अनावश्यक अतिथि को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी
रातमा अन्धकार किन छ: एक वैज्ञानिक व्याख्या
कसरी "प्रोत्साहन" आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्न: पूर्ण निर्देशन
स्प्रे पातलो Fitospray: समीक्षा। कसरी वजन गर्न स्प्रे प्रयोग गर्ने?